Jawaab: Sheekh waxaan ku waydiinayaa saddex su'aalood oo wahhaabiyada ku saabsan?
assalaamu calaykum: Walaal su'aalahaagii jawaabahoodii waa kuwan:
1. Wahhaabiyadu walaal markhaati ma gasho, qofkii haysta caqiidada wahhaabiyada markhaati ma galo sababtuna waa: in markhaatigu yahay qof muslim ah oo caadil ah, wahhaabiyaduna muslim ma aha caadilna ma aha ee waa ahlu shirki iyo kufri, caddaalad iyo ayaguna way kala dheeryihiin.
2. Walaal wahhaabiyadu mad-habadaha Islaamka midna kama haystaan, qaarkood waxay sheegtaan in ay fiqhigii Imaam Axmad haystaan, laakiin caqiidadooda ayaa habowsan, waana beentood oo Imaam Axmad fiqhigiisii ma haystaan, ee figrado Imaamka loo saarshay oo been ay oo figrado habowsan ah iyo figradihii Ibn Taymiyyah iyo kuwii Ibn Xizam iwm ayay adeegsadaan, figradahaasina waa figrado fallaago ah oo lunsan.
3. Walaal wahhaabiyadu waxay u qaybsantaa kooxo kala duwan oo magacyo kala duwan la baxay, soomaaliya waxay isku magacaabeen Itixaad, waxayna u sii kala qaybsameen kooxo yaryar. Waddama carabtana sidoo kale, Masar waxay la baxeen (Ansaaru Sunnah), Suudaan sidoo kale, Sacuudiga waxay u qaybsameen dhowr kooxood, Hindiya, Indonisa iyo Malaysia iyo Carabaha iyo Caalamka kale dhammaan way ku firirsanyihiin, laakiin dhammaantood waa isku caqiido, waxaana kulmiya caqiidada habowsan ee saddexlayda ah ee ay Nasaarada iyo Yahuudda ka soo qaateen, iyo waxyaabo kale oo dhammaan kufriyaad ah.
Hadalkii oo kooban wahhaabiyadu waa kufaar
Marka walaal wahhaabiydu waa kufaar, waxaana u daliil ah ictiqaadkooda faasidka ah ee ku salaysan tashbiiha iyo tajsiimka iyo tathliithka, intaa kaliya ma aha ee waxaa jira masaa'il badan oo ay ku kufriyeen, kooxohooda oo dhanna waa isku mid, kufrigaas way ka simanyihiin.
- Sunday, January 29, 2006 at 09:38:23 (CST)
Su'aal: Sheekh waxaan ku waydiinayaa saddex su'aalood oo wahhaabiyada ku saabsan?
assalaamu calaykum Sheekh waxaan ku waydiinayaa (3)su'aalood:
1. Wahaabiyadu marqaadi ma galaan iyo wixii dinta meel kaga dhaca oo dhan mar hadey diinta been ka sheegayaan?
2. Wahaabiyadu mad-hab ma ka heystaan afarta mad-habood?
3. Wahaabidu meeqa ayey u qeybsamaan ma hal urur baa mise waa dhowr? wass/c/w/w/h.
Muxyadiin shaykh axmad <jaabir75>
- Sunday, January 29, 2006 at 09:28:21 (CST)
Jawaab: dhagaysigga Heesaha Jacayilka ahi ma Dambibaa?
Assalaamu Calaykum: Walaal heesaha jacaylka ah dhegaysigooda waxba kuma jabna wayna bannaantahay haddii aanan wax sharciga khilaafsan ku jirin, sida hadalka faaxishka ah ee xun, laakiin heestu siddeeda kale xaaraan ma aha haddii hadal fiican la sheegayo oo caadifo ah ama ammaanid ah ama waddaninimo ah iwm.
- Sunday, January 29, 2006 at 09:23:55 (CST)
Su'aal: dhagaysigga Heesaha Jacayilka ahi ma Dambibaa?
Assalaamu Calaykum: Walaal Sh. Xirsi dhagaysigga Heesaha Jacayilka ahi ma Dambibaa?
- Sunday, January 29, 2006 at 09:21:34 (CST)
Jawaab: Dayaxa_oo_ku yaal toddobada samo dushooda sidee cirbixiyeenku ku gaareen?
Assalaamu Calaykum: Walaal Mahat, horta waxaad ogaataa in dayaxu ka mid yahay xidigaha lagu qurxiyay samadan adduunyada, kumana yaallo toddobada samo dushooda sida aad u malaysay, diintuna sidaas ma sheegin.
Sida lagu sheegay Suuratul Mulk aayadda 5aad, iyo Fusilat aayadda 12aad. Aayadahaas waxaa laga fahmayaa in Samada adduunyada lagu qurxiyay xiddigaha, dayaxuna xiddigaha ayuu ka mid yahay.
Laakiin aayadda 16aad ee suuradda Nuux ayaan u malaynayaa in aad tilmaamayso, taasina daliil uma aha in dayaxu ku yaallo toddobada samo dushooda ee waxay aayaddu sheegaysaa in dayaxu nuur u yahay toddobada samo
Sikastaba ha ahaatee, dayaxa kuwa sheeganaya in ay tageen, annagu ma garanayno in ay run sheegayaan iyo inkale, laakiin mustaxiil ma aha oo waa la tegi karaa Ilaah idankiis.
- Sunday, January 29, 2006 at 09:11:20 (CST)
Su'aal: Dayaxa oo ku yaal toddobada samo dushooda sidee cirbixiyeenku ku gaareen?
Ditoore waxaan ku waydiin lahaa su'aal iga yaabisay aniga taas oo ah: sida aan lasocono dayaxu waa shay ilaahay meeshaa ku abuuray, waxaan diintu qabtaa in todoboda samo ka sareeyo, marka sidee baa dad ku tagi karaan oo waliba ciid uga soo qaahi karaan?
Arintaasi ma macquulbaa mise waa been ay iska abuurayaan dadkaa? mahadsanid.
- Sunday, January 29, 2006 at 08:35:52 (CST)
Jawaab: Meherka muxalilka ah ma bannaanyahay
Assalaamu Calaykum, walaal ninkaaga iyo adigu haddii aad ku kala tagteen furriin saddex dalqadood ah sharcigu idiinma ogola in aad isku soo laabataan asiga oo aanan ninkale ku guursan oo aanuu iskiis isaga kaafurin.
Nikaaxa Muxallilka Culumadu way diideen
Walaal nikaaxa muxalilka ah ee naagta nin guursanayo si uu ugu xalaaleeyo nin kale culumadu way diideen, waxayna soo daliilsadeen xaddiiska uu Nabigu ku nacaladay Muxalilka iyo kan wax loo xalaalaynayo labadaba.
Waxaa kale oo sheegay Imaam Shaafici kitaabkiisa al-Um, wuxuu yiri waa sidi Mutcada, nikaax kasta oo waqti ku xiran waa baadil sida uu sheegay imaamku eeg kitaabkiisa juzka 5aad, baalka 79, iyo wixii ka dambeeya.
Marka walaal ninka muxalilka ah ama ha u tago naagta ama yuusan u tegin nikaaxiisa waxba kama jiraan sida culumada badankoodu qabaan. Waxaa jira qaar yiri: nikaaxu wuu ansaxayaa shardiguna waa baadil, macnaha haddii ninka muxalilka laga dhigayay uu naagta furi diido oo iska haysto nikaaxaas wuu ansaxayaa ayay ka wadaan, laakiin taasi ma aha muxalil ee waa meher caadi ah.
Hadal iyo dhammaantiis, culumada warkoodii iyo addillada axaadiista ah waxay tusaysaa in uusan bannaanayn nikaaxa noocaas ah.
- Saturday, January 28, 2006 at 21:11:55 (CST)
Su'aal: Meherka muxalilka ah ma bannaanyahay
ass/c/w/w/h walaa salaantaas islaamka kadib maadaama aanu nahay dad islaam eh waxaa waajib ah in aan ku dhaqano shareecada islaamka: waxaan kala tagnay odageygii waxaana ku kala tagnay dalqadooyin dhameystiran waana is jecelnahay weli waxaan go'aansanay in aan isku laabano marka walaal waxaan ku weydiinayaa 2 su,aalood:
1. Waxa ey ka qabto diinta islaamka aniga iyo odageyga hadii aan isla ogolaano ninka imahersaday oo maxlalka ii ah in aan iska furo keygii horana ku laabto maxey diintu ka qabtaa?
2. Mida kale akhii hadaan ninkaas danbe asagoon ii tegin iska furo maxaa ku jaban?
nasra cali <naasro>
- Saturday, January 28, 2006 at 20:53:45 (CST)
Jawaab: Sidee_wahaabiyadu gaalo ku noqonayaan ayaga oo xaramaynka jooga?
Assalaamu calaykum: walaal waad mahadsantahay, su'aasha aad i waydiisayna waa su'aal muhiim ah, maxaa yeelay dad badan ayaan ogayn arrinkaas oo u malaynaya in qofkii xaramka tagaba uu iimaankiisu ama islaamnimadiisu toosantahay.
Qof kasta oo xaramka taga mu'min ma aha
Walaal haddii qof kasta oo Maka taga uu mu'min yahay, abuu jahal iyo abuu lahab labaduba waxay degganaayeen Maka. Islaamnimadana laguma qiyaaso magaalooyinka la degganyahay ee waxaa lagu qiyaasaa ictiqaadka qofka iyo afcaashiisa.
Qofkii xajka iyo cumrada in uu aado doonaya
Hadaba qofkii doonaya in uu xajka iyo cimrada aado wuu aadi karaa, taasina kuma xirna wahhaabiyada joogta sacuudiga, maxaa yeelay Nabigeennu wuxuu xajiyay ayada oo kufaartii quraysh kacbada joogto.
Qofkii sacuudiga jooga sidee u tukanayaa?
Dadka sacuudiga jooga dhammaantood wahhaabiyo ma aha, badankoodu waa ahlu suno, waxaa wahhaabiyo ah koox yar oo ka timid Najid, dhulkii Musaylamah al-kaddaab oo xukunka haysata, marka inta kale siiba reer Maka iyo Reer Madiina waa ahlu sunno ashaaciro ah.
Marka qofkii aad doonto ku daba tuko haddii aad sacuudiga joogto, haddii aadan ogayn waxa uu yahay, laakiin haddii aad ogtahay in uu wahhaabi yahay waa xaaraan in aad ku dabatukato, maxaa yeelay wahhaabiyadu waa kufaar salaad iyo xaj iyo soon midna ka ansixi maayo.
Wahhaabiyadu waa sidi faadimiyiintii, iyo Tataarkii iyo khawaarijtii
Kooxahaas waxay ahaayeen kooxo aad u xoog badan sida faadimiyiintii, waxay dhiseen magaaladan Qaahira loo yaqaan, iyo Masaajidka al-azhar, culumada oo dhanna waxay isku raaceen in ay kufaar ahaayeen badankoodu.
Khawaarijta sidoo kale, badankooda muslimiintu way kufriyeen, waxayna ahaayeen koox cibaado badan oo quraanka ku dheggan wahhaabiyadan way ka fiicnaayeen maxaa yeelay kuwani quraanka xataa ixtiraami maayaan.
Waxaa kale oo la mid ahaa Tataarkii, oo baqdaad qabsaday iyo kooxdii Abuu muslim al-khuraasaani iyo kooxo badan oo kale oo dhammaan muslimiintu kufri ku xukumeen.
Kooxahaas waxyaabo badan oo wanaagsan bay sameeyeen, laakiin taasi ma anficin, maxaa yeelay caqiidadooda ayaa habowsaneed sida ay hadda wahhaabiyadu tahay.
Marka walaal wahaabiyadu waa kufaar shakina kuma jiro taas, qofkii aanan kufrin ee caqiidadooda saxana waa kaafir, jaahilnimana loogu cudurdaari maayo. Khayr baan kuu rejaynayaa.
- Saturday, January 28, 2006 at 08:24:54 (CST)
Su'aal: Sidee wahaabiyadu gaalo ku noqonayaan ayaga oo xaramaynka jooga?
Salaamu caleykum w/raxmatu allahi wa barakaatu: Dr xirsi hadii aad tiri wahaabiyadu waa gaalo maxaa markaa la gudboon qofkii sucuudiga ku nool ama xajka / cimrada u aada. sidee baa xajkiisa iyo cimradiisu iyo saladiisu u ansixikaraan? waayo waxaan jawaabahaaga badankood ku arkey in nimankaasi lunsanyihiin misana waxey ku nool yihiin ardal xarameynka? Wasalaamu caleykum.
- Saturday, January 28, 2006 at 08:11:53 (CST)
Jawaab: Madaahibta_Islaamka, ma mid kaliya ayaan ku gaabsadaa, mise waan isku dhafi karaa?
Assalaamu calaykum, walaal sida aad sheegtay dadku waa laba qolo, qolo cilmiga aad u baratay oo mujtahidiin ah, sida culumada waawayn ee madaahibta leh. Qolada labaadna waa dadka caamada ah iyo wixii caamada la mid ah sida culumada haryar ee aanan mad-hab lahayn.
Waxaa waajib ah in hadalka culumada la raaco
Ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku caddeeyay in qofkii aanan wax aqoon uu raaco dadka wax yaqaan, dadka wax yaqaanna "Ahlu Dikri" ayaa quraanku ku magacaabay, "Raasikhiin"-na waa lagu magacaabay, "kuwa cilmiga leh"-na waa lagu magacaabay "alladii cindahu cilmun".
Marka qofkii asigu aan ahlu dikri ahayn, macnaha "mujtahid ahayn" waxaa waajib ku ah in uu culumada raaco, sida quraanka ku cad.
Qofkii caamo ah uma bannaana in uu quraanka iyo axaadiista sidii uu doono u fasirto sida wahhaabiyadu yeelayso
Muslimiinta oo dhan waxay raaci jireen oo ay Ilaa maanta raacaan hadalka culumada mujtahidiinta ah, kooxaha fallaagada ah sida wahhaabiyada iwm ayaa quraanka iyo xaddiiska sidii ay ayagu doonaan u fasirta ayaga oo caamo ah ama aanan caamada waxba dhaamin.
Marka halkaas kitaabka quraanka ah ayay ku khilaafeen, amarkii Ilaahayna way jebsheen, marka Ilaahay kuwaas shartooda ha inaga badbaadsho, ayagana allaha soo hanuunsho.
Ma khasab baa in hal mad-hab la qabsado, mise waa la dooran karaa
Walaal sida aan ognahay madaahibtu waa aragtidii culumadii mujtahidiinta ahayd, mid kastana wuxuu haystaa daliilkiisa, waxaana laga dhaxlay madaahibtaas, asaxaabta nabiga, maxaa yeelay ayaga ayaa laga bartay cilmiga diinka, ayaguna waxay ka soo barteen Nabigii nnk.
Waxaa kale oo aan ognahay in asaxaabtu waagii ay jirtay ay muslimiintu midkii ay doonaan wax ka baran jireen, ayaga oo xorriyad buuxda haysta, qaar Cabdullaahi bin Cabbaas bay wax ka barteen, qaarna Cabdullaahi bin Mascuud, qaarna Sayd, qaarna Abuu muusa al-Ashcari qaarna Imaamyada afarta ah sida Abuu bakar iyo Cumar iyo Cusmaan iyo Cali iyo qaar kale oo badan.
Marka halkaa waxaa kaaga cad in qofka muslimka ah xor u yahay in uu wax ka barto qofkii uu doono, kaliya waxaa laga rabaa in qofkaasi wax yaqaan oo mujtahid yahay.
Madaahibta Culumadu waa sidii madaahibtii asaxaabta
Kolkii asaxaabtii dhinteen, ayaa taabiciintii madaahib kuwii asaxaabta la mid ah sameeyeen, kolkaas baa waxaa soo baxay, Ibn Musayab, iyo Xasan al-Basri iyo Abuu Xaniifa iyo qaar kale oo badan oo dhammaan ah jiilkii taabiciinta.
Kadibna waxaa yimid culumadii mujtahidiinta ahayd sida Rabiicah, iyo Maalik iyo Shaafici iyo Axmad, iyo Muxaasibi iyo boqollaal kale.
Intaas oo dhan, nin waliba ninkii uu doono ayuu wax ka baran jiray, nin la khasbay ama la yiri aniga isoo raac ama qof aan aniga ahayn wax kama barankartid la yiri ma jiro.
Madaahibta afarta ah middii aad doonto ka dooro, ama mas'aladii aad doonto ka dooro
Marka walaal waxaa habboon in qofka muslimka ah hal bad-hab ah qabsado oo ku dhaqmo, Ilaa uu mad-habtaas si fiican uga fahmayo, markaa haddii uu wax barto uu meelaha shiikhiisa looga fiicanyahay haddii uu fahmo ka wareegsado oo markaa uu ka qaato meelahaas imaamyada kale ee madaahibta kale leh.
Sikastaba ha ahaatee, culumada qaar ayaa diiday in la isku dhafo madaahibta, waxayna u yaqaaniin "Talfiiq", laakiin anigu waxaan qabaa in aanay waajib ahayn in hal mad-hab la qabsado oo aanan mid kale loo gudbin, laakiin way fiicantahay.
Mad-habtu waa ijtihaad, ijtihaadkuna wuxuu ku waajibaa ninka ijtihaadkaas leh iyo ninkii aanan wax aqoon
Marka walaal, mad-habtu waa nin caalim ah ijtihaadkiis, ijtihaadkaas wuxuu ku waajib yahay qofka ijtihaaday oo kaliya. Qofkii caamo ahna waxaa ku waajib ah in uu ijtihaadyada culumada mid ka mid ah raaco.
Taas ayaa marka kuu caddaynaysa in ay bannaantahay in qofka caamada ah uu fatwada ka qaato hadba shiikhii uu doono, oo aanay khasab ku ahayn in uu mid kaliya daba socdo.
- Saturday, January 28, 2006 at 08:08:58 (CST)
Su'aal: Madaahibta Islaamka, ma mid kaliya ayaan ku gaabsadaa, mise waan isku dhafi karaa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh: akhii su'aal: waxaan isla ognahay in ey jiraan madaahib diinta islaamak ka dhex shaqeesa sida afarta mad-hab ee macruufka eh, marka akhii afartaas mad-hab mid ka mid eh ma ku gaabsan karaa, maadaama aanan gaarin daraja aan mad-hab ku sameysto, misa mad-hab kasta meeshii iigala fududaato ayan ka qabsan karaa?
muxyadiin shaykh axmad <muxyadiin>
- Saturday, January 28, 2006 at 07:46:46 (CST)
Jawaab: Xaaskayga haddii aan iraahdo, haddii aan sidaa sameeyo 3 dalqadood baad ii ga furantahay..
Assalaamu calaykum, Walaal dalaaqa noocaas ah culumadu waxay ku tilmaamaan "dalaaq mucalaq" macnaha waxbaad ku xirtay oo waxaad tiri: haddii aan waxaa sameeyo 3 dalaaqo baad iiga furantahay, dalaaqa noocaas ah haddii wixii aad sheegtay oo aad tiri fali maayo aad fasho wuu dhacayaa, naagtuna way kaa furantahay.
Waxaa aad sheegayso ama gabadhu ha ku waydiisato ama yaanay ku waydiisan, laba jeeraba wuu dhacayaa. wallaahu acalam.
- Friday, January 27, 2006 at 21:45:38 (CST)
Su'aal: Xaaskayga haddii aan iraahdo, haddii aan sidaa sameeyo 3 dalqadood baad ii ga furantahay..
assalaamu calaykum w/w/h akhii su'aal hadan ku weydiiyo: aniga oo maskaxdeydu taam tahay ayaan xaaskeyga waxaan ku iri: wax eey iyadu i weydiisatay, hadii aan sameeyo sidaas waxaad iiga furantahay 3 dalqadood. Marka hadaan wixii sameeyo xaaskeygu ma iga fumayaa misa waan qabaa weli?
- Friday, January 27, 2006 at 21:42:18 (CST)
Jawaab: Culumadii_hore maxay qunuutka ka dhaheen, maxayse isku raaceen, salaadda subaxse ma lagu gaar yeeli karaa?
Walaal Qunuutku in uu sunno u yahay salaadda subax waxaa caddeeyay Imaam Shaafici oo ka soo weriyay khulafadii afarta ahaa, soona daliilsaday xaddiiska Anas bin Maalik "in Rasuulku qunuuday subaxdii intii uu ka dhintay", Imaam Shaafici wuxuu ku caddeeyay kitaabkiisa al-Umm, juzka 1aad, bogga 132.
Culumada Diiddan Qunuudka
Sidoo kale waxaa arrinkan faahfaahshay dhammaan culumada Shaaficiyada ah, wuxuu ku yiri Imaam Qurdhubi tafsiirkiisa, mujalladka 4aad, baalka 301: Culumadu waxay isku khilaafeen qunuutka salaadda subax, kolkaas baa reer Kuufa diideen waana mad-habtii Layth iyo Yaxya al-Andalusiy Imaam Maalik Saaxibkiis, Shucabina wuu inkiray qunuutka, waxaana ku soo arooray Kitaabka al-Muwada' in uusan qunuudi jirin, waxaana Nasaa'i laga soo weriyay in uu yiri: Abii Maalik al-Ashjaci ayaa yiri: Nabiga ayaan ku daba tukaday mana qunuudin, Abuu Bakar baan ku daba tukaday mana qunuudin, Cumar baan ku daba tukaday mana qunuudin, Cusmaan baan ku daba tukaday mana qunuudin, Cali baan ku daba tukaday mana qunuudin..".
Culumada Sunno ahaan u aragta Qunuudka
Laakiin waxaa laga soo weriyay Imaam Shaafici iyo Xasan al-Basri iyo Saxnuun iyo Daaraqudni iyo imaam Axmad iyo Isxaaq iyo Maalik dhammaan in ay dhaheen waa sunno, qofkii ka tagana sujuuddu sahwi ayaa laga rabaa, Dabarina wuxuu yiri, qofkii kas uga taga sallaaddiisu way fasahaadaysaa, wuxuuna yiri waa ijmaac.
Sidoo kale waxaa soo sheegay in qunuudku sunno yahay oo qofkii ka taga sujuuddu sahwi laga rabo dhammaan culumada Shaaficiyada, Sida Abuu Isxaaq ash-shiiraasii, sida uu ku sheegay Tanbiiha iyo al-Muhadab, iyo al-khadiib al-sharbiinii, sida uu ku sheegay kitaabkiisa al-Iqnaac , juska 1aad baalka 170, iyo Muqni al-muxtaaj, juska 1aad bogga 166. Iyo Imaam Qasaali, sida uu ku sheegay kitaabkiisa al-wasiid, iyo Imaam Nawawi kitaabka Rowdada juska 1aad, iyo Minhaaja, juska 1aad, baalka 16aad, iyo Majmuuca juska 3aad, baalka 456aad.
Dhammaan culumadaas Shaaficiyada waxay isku raacsanyihiin in uu qunuudku sunno yahay, oo waxay soo daliilsadeen xaddiiska Anas Bin Maalik ee aan kor ku soo sheegay iyo axaadiis kale oo uu yiri Imaam shaafici waxay caddaynayaan in qunuudka salaadaha kale uu nabigu ka tegay laakiin uusan salaadda subax ka tegin Ilaa uu ka dhintay.
Culumadu way isku raacsanyihiin in Qunuudku sunno yahay
Marka walaal culumada oo dhan horta way isku raacsanyihiin in qunuudku sunno yahay, laakiin waxay isku khilaafeen goorma ayuu sunno yahay? Kolkaas baa reer Kuufa oo ah Xanafiyada iyo qaar maalikiyada ka mid ah iyo xambaliyada dheheen wuxuu sunno yahay salaadaha sunnada ah sida taraawiixda, iyo markii dhibaato ku dhacdo muslimiinta, waliba Imaam Axmad wuxuu intaas ku deray, Imaamka ayaa leh qunuudka haddii dhibaato dhacdo.
Culumada Xanafiyada sida Imaamka Xanafiyadu sheegay waxay dhaheen wax daliil ah kuma soo aroorin in qunuudku salaadda waajibka ah sunno u yahay, sida ay tilmaamen culumada waawayn ee xanafiyada sida, Maxamad Bin Xasan ash-shaybaani iyo Abuu Yuusuf iyo Sarkhasi kitaabkiisa al-Mabsuud, iyo Imaam al-Maraagi, kitaabkiisa al-Hidaayah, iyo Imaam Cumar as-Saylici Kitaabkiisa Tabyiin al-Xaqaaiq, iyo Xaafidkii Cabdullaahi Saylici Kitaabkiisa Nasb al-Raayah (labadan dambe waa culumadii Soomaalida ee hore), iyo Baxr al-Raa'iq sida ku taalla juska 1aad baalka 319, iyo Xaashiyada Ibn Caabidiin iyo Xaashiyada ad-Daxaawi, dhammaan culumadaas oo xanafiyo wada ah waxay sheegeen in aanan qunuudku sunno gaara u ahayn salaadda subax.
Xambaliyada kutubtooda sida Fadxul qaddiirka, iyo Sharaxiisa uu qoray assuwaysi wuxuu yiri, qunuudku waa in uu ahaado inta aanan la rukuucin, shaaficiyaduna waxay qabaan in uu ahaado rukuuca kadib.
Marka walaal, sida kuu muuqata, daliilka xooga leh waxaa wata Imaam shaafici, maxaa yeelay culumada ciraaq waxaa laga yaabaa in aanay maqal xaddiiska Anas, sida Imaam Axmad iyo Imaam Abuu Xaniifa oo ay maqleen xaddiiska nasaa'i oo kaliya, meesha Imaam Maalik iyo Shaafici ay reer Madiino ahaayeen, oo ay axaadiista oo dhan wada maqleen kadibna isu miisaameen.
Marka walaal Imaam shaafici waxaa arrinkaas ku taageersan culumada jabaabiirta ah sida Imaam Muslim iyo Bukhaari iyo Ibn Xajar iyo Nawawi iyo Qurdubi iyo Dhabari, dhammaantood waxay taageersanyihiin Shaafici, taas ayaana ku tusaysa in shaafici daliil xaddiis ah oo xoog leh haysto.
Marka walaal sida mad-habta shaaficiyada aan ku wada aragnay oo aan wada ognahay, maxaa yeelay annaga soomaali shaaficiyo ayaan wada nahay, culumada shaaficiyadu waxay sunnooyinka salaadda u qaybshaan abcaad iyo hay'aat, marka qunuudka salaadda subax iyo midka bisha rabadaan 15ka ugu dambeeya ah waxay dheheen waa abcaad, midka waqtiyada kale la akhriyana sida mararka musiibadu dhacdo waxay dhaheen abcaad ma aha, marka qaybta ah abcaadda ee ah falka salaadda qayb ka mid ah qofkii ka taga waa in uu sujuuddu sahwi la yimaado, waana aragtay in Imaam Dabari yiri waa ijmaac, salaadduna way fasahaadaysaa haddii uu qofku kas uga tago.
Waxaa kale oo ay dheheen salaadda wuxuu uga jiraa rukuuca ugu dambeeya ka dib, haddii qofku rukuuca ka hor akhriyo, ka ansixi maayo, haddii uu imaamku akhriyo adiga oo la tukanaya oo ka soo daahay salaadda, marka uu imaamku dhameeyo waa in aad adigu la timaadid, maxaa yeelay midkii imaamka wuxuu kugu soo aaday salaadda dhexdeeda adiga oo ku jira, sidaas ayay dheheen culumada shaaficiyadu. Ilaahay khayr ha siiyo, culumada warkoodii waa kaas, ajar iyo xasnaad allaha siiyo.
Dadka cilmi la'aanta iska hadla, ee culumada warkooda liida waa dhurlaawayaal
Marka walaal waxaa jira qaar dhurdarsaday oo Ilaahay naxariistiisa ka fogeeyay sida qolyahan wahhaabiyada iwm, oo culumada warkooda uun duraya, ayaga oo aanan fahmayn waxa culumadu sheegtay ayay durayaan, subxaana laah.
Marka dadka noocaas ah cilmiga iyo ayagu wax xiriir ah malaha, maxaa yeelay cilmiga culumada ayaa laga bartaa, waana in la qadersho dadaalkooda oo loo duceeyo oo abaalkooda laga dafirin, waad aragtay dadaalka ay sameeyeen, kutubta aan kuu sheegay waxaa ku jira qaar 40 mujallad gaaraya sida kitaabka al-mabsuud iyo majmuuca iwm. Marka shaqo badan ayay qabteen Ilaahay khayr ha siiyo annagana ixtiraam ayay inaga mudanyihiin, maxaa yeelay midka inoogu fiican kabtooda ma gaarayo.
Bal fiiri, qofkii aanan Bukhaari Ixtiraamayn oo Shaafici ixtiraamayn oo Nawawi ixtiraamayn, oo Imaam Saylici iyo Ibn Xajar iyo dhammaan kumanyaalkaas wada jabaabiirta ah ixtiraamayn ee maanta oo dhan kugu qirqiraya hadalkii Ibn Cabdulwahhaab iyo Ibn Taymiyyah, inta kalena kufaar in ay yihiin u haysta maxaa lagala hadlayaa?
- Friday, January 27, 2006 at 07:33:16 (CST)
Su'aal: Culumadii hore maxay qunuutka ka dhaheen, maxayse isku raaceen, salaadda subaxse ma lagu gaar yeeli karaa?
Assalaamu calaykum w/w/h akhii danbigaada allaha dhaafo & danbi waalidkaaba, waad iga qancisay su'aalihii igu taagna, waxaan ina wareeriyay kuwa aan ilaahey ka xishooneyn oo wexey doonaan iskaga hadalayo, marka akhii hadaan su'aal kale ku weydiiyo: mexey culimadii hore ka dheheen qunuutka salaada subax la qunuudayo? mexeysa ku heshiiyeen? ma lugu gaar yeeli karaa salaada subax qunuudka salaadaha kale ka sokoow?
- Friday, January 27, 2006 at 06:34:18 (CST)